Pituitary Luteinizing Uwandu hwemakemikari kuti jekiseni (LH) - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
Pituitarii Lutropinum Pro Injectione (LH) [Description] chigadzirwa uyu chena kana kure-chena Ndinoda-kuomeswa mabhuroko kana upfu. [Rinoshanda uye kushandiswa] Uwandu hwemakemikari zvinodhaka. Achibatsirwa pituitary follicle-anotokonya kemikari, unogona kutsigira kwokupedzisira kuibvisa pamusoro follicles, kufurira ovulation pamusoro follicles vakura uye kufurira chizvarwa corpus luteum mbeu. Zvinonzi ainyanya kushandiswa: 1. Kurudzirai follicles kukura uye ovulate; 2. Kutsigira chizvarwa dzichipfekeka corpus leteum; 3. Rapai ovulation ...
chigadzirwa Izvi chena kana kure-chena Ndinoda-kuomeswa mabhuroko kana upfu.
Kemikari zvinodhaka. Achibatsirwa pituitary follicle-anotokonya kemikari, unogona kutsigira kwokupedzisira kuibvisa pamusoro follicles, kufurira ovulation pamusoro follicles vakura uye kufurira chizvarwa corpus luteum mbeu.
Zvinonzi ainyanya kushandiswa: 1. Kurudzirai follicles kukura uye ovulate;
2. Kutsigira chizvarwa dzichipfekeka corpus leteum;
3. Rapai ovulation kutadza (murombo pakunamata follicles; kunonoka ovulation);
4. Rapai mangwanani rufu kana kubvisa pamuviri tuvana kukonzerwa hypoplasia pamusoro corpus luteum mbeu;
5. Rapai kupfupika oestrum wodzokorora mwene mhuka hadzi;
6. Kuporeswa follicle chikofu;
7. Rapai varume nemhuka yakaderera pabonde nemotokari, pasi urume vhoriyamu uye zvishoma dzisingaoneki.
I. A pplication pamusoro C attle Pamuviri
1. nekurapwa mira ovarian nerevane: intramuscular jekiseni 200IU pamusoro FSH ndinoiitawo 100IU pamusoro LH; ari dosing inofanira kudzokororwa kamwe kana zviri isashande.
2. Induction kuti ovulation: intramuscular jekiseni 200-300IU pamusoro LH panguva kuberekesana kana akawanda maawa vasati kuberekesana anogona kukurudzira ovulation uye kuvandudza pamuviri unodiwa.
3. yekuenderanisa kuti ovulation: intramuscular jekiseni 200IU pamusoro LH panguva estrus vanhukadzi mombe pashure kubatwa ne estrus yaunonyanya kushandisa anogona mberi pave yaunonyanya kushandisa kuti ovulation uye kuvandudza pamuviri mwero pashure estrus yaunonyanya kushandisa.
4. Super ovulation: intramuscular jekiseni 200IU pamusoro LH maawa 72 pashure Super ovulation kunokwanisa kusimudzira kuibvisa uye ovulation pamusoro follicles uye kuwedzera migumisiro Super ovulation.
5. Kutadzisa kupfupfudzika: intramuscular jekiseni 200IU mazuva LH anoverengeka pashure chakagadzirwa insemination; kuramba Kutarisira 2-3 akatevedzana mazuva.
1. Zvokuvandudza Super ovulation kwakabatsira nhunzvi: intramuscular jekiseni 100-200IU pamusoro LH maawa 72 pashure Super ovulation kunokwanisa kusimudzira kuibvisa uye ovulation pamusoro follicles uye kuti ovulation nemasiraidhi akapendwa.
2. Intramuscular jekiseni 50-100IU kuti LH nokuda nhunzvi panguva kana mushure iyo boka richitora mazamu, kuti 2-3 anotevedzana mazuva anogona kurapa mangwanani rufu kana vanongogara pamuviri tuvana kukonzerwa hypoplasia kuti corpus luteum mbeu.
3. Rapai varume nemhuka yakaderera pabonde nemotokari, murombo mbeu unhu, cryptorchidism, uye kusabetsera, etc.
chigadzirwa ichi kazhinji haana kugadzirira kupinda mhinduro kuti kuchengetera pakuparwa deactivation.
The dose anofanira kaviri kuti mishonga ovarian chikofu.
[Term kuti ukoshi] 2 makore
[WIthdrawal Period] No zvokudya
Previous: Pituitary Follicle Inokurudzira Uwandu hwemakemikari kuti jekiseni (FSH)
Next: Posterior Pituitary jekiseni